Chelsea oo qaatiyaan ka taagan Diego Costa maadaama uu dalbanayo…. – Gool FM
Funaanadda ay Kooxda Real Madrid ugu dabbaal-degayso hanashada horyaalka La Liga oo si aan ku talogal ahayn suuqa la soo dhigay… (Imise lacag ah ayaa lagu iibinayay?)
Paul Pogba oo ku dhow inuu qandaraaska u kordhiyo Kooxdiisa Manchester United… (Imise sano ayuu qalinka ugu duugayaa?)
Chelsea oo qaatiyaan ka taagan Diego Costa maadaama uu dalbanayo….
Haaruun Yuusuf April 21, 2017
(London), 21 Abriil 2017 –Kooxda kubadda cagta Chelsea ee waddanka Ingiriiska ayaa qaatiyaan ka taagan weeraryahankeeda Spanish-ka ah ee Diego Costa kaas oo dalbanaya in mushaarkiisa sare loo qaado haddii kale uu naadiga ka tegayo.
Saxaafadda Ingiriiska ayaa sheegaysa in Costa oo 28 sano jir ah uu haatan qaato 150,000 Giniga Istarliinka ah, waxaana uu codsanayaa lacag intaa ka badan maadaama looga gacan haatinayo kooxaha Horyaalka Shiinaha.
Sky Sports ayaa isna soo warineysa in kooxda Tianjin ee Shiinaha ka dhisan ay Costa doon doonayso, iyadoo damacsan in ay ka dhigto laacibkani laacibka ugu mushaarka badan kubadda cagta caalamka, toddobaadkiina siin doonto 650,000 Giniga Istarliinka ah.
Diego Costa ayaa qandaraaskiisa garoonka Stamford Bridge waxa uu ku eg yahay xagaaga 2019.
Daawo van Basten oo isagoo 52 jir ah dhalinaya Gool labaaleey ah
RASMI: Juventus oo la saxiixatay Rodrigo Bentancur